गुल्मीमा भयो यस्तो घटना, ३ जनाको बिभत्स हत्या शवको पहिचान हुन सकेन । तपाईको कोही परे की ? सेयर गरौ (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
गुल्मीमा भयो यस्तो घटना, ३ जनाको बिभत्स हत्या शवको पहिचान हुन सकेन । तपाईको कोही परे की ? सेयर गरौ (भिडियो सहित)
Mahesh Bohara November 2, 2019
बुटवल, कार्तिक १६ । शनिवार विहान गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा वेवरिसे अवस्थामा मृत फेला परेकी एक महिला र अर्की पनि दुई वटीबालिका भएको खुलेको छ । दुई बालबालिकाको शव मध्ये महिलाको टाउँकोमा । सो गाउँपालिका वडा नम्वर ३ साविक हर्राचौर गाविसको उर्लेनी भन्ने स्थानको कच्ची सडक देखि तल बेबरिसे तिन जनाको शव भेटिएको थियो ।
यस सम्वन्धमा सम्पर्क राख्दा जिल्ला प्रहरी प्रबक्ता डिएसी मिनबहादुर घलेले टाउँकोमा चोट फेला परेको , ति महिला बालबालिको म्ुचुल्का उठाउन थालिएको जानकारी दिए । तर अहिले सम्म शवको पहिचान हुन सकेको छैन । घटना स्थलमा पुगेका चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष द्रोणबहादुर खत्रीले कसैले हत्या नै गरेर फालेको ब्ुझ्न सकिने महिलाको मुहार देखि टाउँको सम्म लागेको घाउचोटले र घटना स्थलको प्रकृतिले देखाउ छ ।
अध्यक्ष खत्रीका अनुसार ति महिलाको चेहरा , गहना र कपडाको पहिरन हेर्दा चन्द्रकोट गाउँपालिका भित्रकी महिला होईनन । अध्यक्ष खत्री भन्छन मंगोलियन चेहरा छ ज्ुन चेहरा रुकुम राल्पा , भित्रि प्युठान र बाग्लुङ्गको पनि भित्रि विकट गाउँका महिलाको जस्तो देखिन्छ । नाकमा नथिया लगाएकी छन । ति महिलाको शव नजिकै घन ( हेम्बर ) समेत फेला परेकोले त्यसले प्रहार गरि नरसंहार हत्या गरेको प्रत्यक्षदशीले अनुमान गरे पनि प्रहरीले प्रहरीले यहि नै हो भनेर भनेको छैन।
भिडियो हेर्नुहोस अनि शव पहिचानको लागी एक एक सेयर गर्नुहोस ।